Bixinta Waqtiga xaddidan: Shark Black Lucifer T1 Dhagaha-dhegaha Wireless-ka iyo Shark Madow Mako M1 | Androidsis
Bixinta waqti xaddidan: Black Shark Lucifer T1 Dhagaha-dhegaha Wireless-ka iyo Shark Black Mako M1
daniplay | 16/11/2021 08:15 | Qalabka kale
Iyadoo Black Friday uu yimid dalabyo aad u kala duwan oo muhiim ah macaamiisha meel kasta oo ay adduunka ka joogaan. Maalintaan ka dib, isticmaalayaashu waxay raadinayaan hadiyado taariikhaha ugu muhiimsan, iyagoo ku dhow maalmaha dhalashada, Christmas iyo Three Kings, dhammaantoodna waxay calaamad u yihiin kuwo gaar ah.
Raadinta hadiyadda ugu fiican, qaar badan ayaa eegaya aaladaha tignoolajiyada, qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaa loogu talagalay inay isticmaalaan ku dhawaad ​​maalin kasta, sida caadiga ah si joogto ah u isticmaalaan. Kuwo badan ayaa muhiim ah, si aan had iyo jeer gacanta ugu haynoHaddi ay ahaan lahayd baabuurka, boorsada dhabarka ama jeebka.
Taleefannada dhegaha la gashado waa shay muhiim ah, gaar ahaan marka loo isticmaalo deegaan kasta, haddii aan ku ciyaarno ciyaaraha aan jecelnahay, gudaha baabuurka ama bannaanka. Qaar ka mid ah taleefoonnada gacanta ee ku habboon ciyaaraha waa Black Shark Lucifer T1 Wireless Earbuds, Ma ihi mid aad u weyn oo had iyo jeer leh madaxbannaani.
1 Isla qiimo la mid ah kan Black Friday
2 Waxa uu leeyahay Shark Black Lucifer T1 Dhagaha-dhegaha Wireless
2.1 Sameecado dhegeysi oo aad u hooseeya
2.2 Madax-bannaani muhiim ah
2.3 ilaalinta IPX4
2.4 Makarafoono tayo sare leh iyo astaamo kale
3 Shark Black Mako M1
4 Madax-bannaanida isticmaalka
5.1 Soo koobida Astaamaha
Isla qiimo la mid ah kan Black Friday
Si aad uga faa'iidaysato soo jeedinta, Black Shark Lucier T1 Dhagaha-dhegaha Wireless waxaa laga iibsan karaa on Amazon iyada oo loo marayo xidhiidhkan 23,99 euro oo leh koodka N4DK4DZ8, koodkuna wuxuu shaqaynayaa Noofambar 15 ilaa 21. Waa soo jeedin soconaysa hal usbuuc oo loo isticmaali karo hadyad ku habboon taariikhahan.
Haddii ay dhacdo in aad raadinayso jiirka ciyaaraha, the Black Shark Mako M1 dual-mode wireless / fiilooyin Waxay noqon kartaa doorashadaada ugu fiican, oo waliba iib ah. Gaar ahaan, waxay ka bixi doontaa qiimihiisii ​​asalka ahaa ee € 49,99 ilaa € 24,99 oo leh kuubanka 85L9U7T9 oo aad ka faa'iidaysan karto halkan riix.
Waxa uu leeyahay Shark Black Lucifer T1 Dhagaha-dhegaha Wireless
Sameecado dhegeysi oo aad u hooseeya
Mid ka mid ah dhinac uu ka taagan yahay Shark Black Lucifer T1 Dhagaha-dhegaha Wireless-ka ee Wireless-ka ayaa ah mid daahsoon, waa ultra-hoose oo leh 55 ms, waxaas oo dhan waxay ku xiran yihiin Bluetooth 5.2. Si tan loo sameeyo, dhaqaaji habka ciyaarta si aad u wanaajiso waxqabadka wireless-ka. Isku-dubbaridka maqalka iyo muuqaalka ayaa kaa dhigaya inaad si dhakhso leh ugu xirto xaalad kasta ciyaaraha tartanka.
Ciyaarta ka sokow, Black Shark Lucifer T1 Dhagaha-dhegaha Wireless-ka ayaa sidoo kale loo qorsheeyay in lagu dhageysto muusikada, waad dhaqaajin kartaa qaabkan oo waxaad ku raaxaysan kartaa codka immersive. Waxay leedahay dhawaaq qoto dheer iyo soo noqnoqoshyo sare oo dheeraad ah oo ah 10-milimitir xuub, oo uu sameeyay soo saaraha.
Tayada taleefannada dhegaha-dheceedyadu waa mid ku habboon labada deegaan, haddii ay tahay ciyaar ama muusig, waxa u dheer in lagu qaadi karo wicitaannada taleefanka. Raaxada ah in lagu isticmaalo noocyada kale ee deegaanka ayaa ka dhigaya kuwa ugu fiican isticmaale kasta oo raadinaya mid wakhti kasta.
Madax-bannaani muhiim ah
Shark Black Lucifer T1 Dhagaha-dhegaha Wireless-ka waxay leeyihiin madax-banaani waarta, oo kiisku ku dallaco wuxuu gaaraa 35 saacadood. In ka badan hal maalin iyada oo ay suurtogal tahay in aan ku ciyaarno wax kasta oo aan rabno, ha ahaato ciyaaraha, muusikada ama la sheekaysiga dadka si raaxo leh oo dheer.
Madax-bannaanida lammaanaha iyada oo aan kiisku jirin waxay ku saabsan tahay 3,5 saacadood, oo ah waqti muhiim ah, oo ku habboon haddii aan rabno inaan ku xirno PC, console ama xarun muusig. Bluetooth 5.2 wuxuu la falgalaa aaladaha aan rabno isku xidh, ha ahaato telefoonka, stereo, consoles-yada, PC-yada ama aaladaha kale.
Fiilada ku dallaca ee ku jira waa USB-C, si ay u bixiyaan lacag degdeg ah oo isku mid ah oo ay diyaar u waqti gaaban, madax-bannaanida waa arrin fure u ah qalab kasta, ha ahaato headphones, telefoonada, iyo sidoo kale qalabyada kale. Dhererkiisu waa 0,3 mitir, wuxuuna ku habboon yahay in lagu xidho oo la dhigo meel ammaan ah.
35-ka saacadood ee dib-u-ciyaariddu waxay noqon kartaa mid aan kala go' lahayn, adigoo awood u leh inaad daawato fiidiyowyada YouTube, dhegayso muusikada, ciyaaro ciyaarahaaga adigoon soo marin fiilada dallacaadda. Kiiska waxa lagu dacwayn karaa dhawr saacadood gudahood ka dibna sii wad soo saarista dhawaaq tayo sare leh mar kasta.
Awoodda batari ee Black Shark Lucifer T1 Wireless Earbuds waa 40 mAh, oo leh muddada la xaqiijiyay 3 saacadood iyo badh kharashkiiba. Kiisku wuxuu kordhiyaa mAh ilaa 400 mAh, taasoo siinaysa taleefoonnada gacanta madax-bannaani kaasoo socon doona ilaa 35 saacadood.
The Black Shark Lucier T1 Wireless Earbuds-ku waxay ku daraan ilaalinta IPX4, ilaalin horumarsan oo ka dhan ah qulqulka biyaha, daadanaya, roobka fudud iyo dhididka. Taleefannada dhegaha-dhegaha ayaa ku raaci kara jimicsiga iyo nashaadka bannaanka, gaar ahaan haddii aad sida caadiga ah u samayso ciyaaraha maalin kasta.
Ciyaartoydu waxay had iyo jeer u baahan yihiin taleefoonno dhegaha la gasha oo u adkeysan kara xaaladdan oo kale, sidaas darteed way ka wanaagsan tahay marka la tijaabiyo oo la tijaabiyo. Labada lamaane ayaa sidoo kale leh saddex lammaane oo silikoon ah oo cabbirro kala duwan leh si loo xaqiijiyo waayo-aragnimada dib-u-ciyaarista dhawaaqa raaxada iyo badbaadada leh.
Makarafoono tayo sare leh iyo astaamo kale
Dhinac muhiim ah oo ka mid ah Black Shark Lucier T1 Wireless Earbuds waa ku darida 4 makarafoon. (2 ee taleefoon kasta) si kor loogu qaado maqalka iyo shaandhaynta dhawaaqa asalka si loo fududeeyo xidhiidhka dadka. Codku inta badan waa aamin, tayo fiican leh iyo waxaas oo dhan iyada oo aan taleefanka gacanta lagu hayn.
Taleefannada dhagaha-dhegaha ee Shark Shark waxay u oggolaanayaan in taleefoonnada bilaa-waayirka ah laga saaro kiiskii dallacaadda oo si toos ah loogu xidho qalabkii ugu dambeeyay ee lagu lammaaniyey. Lamaanayntu waa dhakhso, ha ahaato telefoon, tablet, PC oo leh Windows, Linux iyo Mac OS X system.
Tilmaamayaasha LED-ka ee taleefoonnada dhegaha la dhegaysta oo ay weheliyaan iftiinka cagaaran ee kiiska dallacadu waxay bixiyaan jawi ciyaar oo cajiib ah, oo ku habboon meelaha iftiin yar ama badan leh. Ciyaartoyda joogtada ah ayaa si dhakhso ah ula qabsan doona, marka laga reebo muujinta in ay leeyihiin baytari.
Koontarooladu waa taabto, si ay u beddelaan hababka taabo saddex jeer oo ku saabsan kantaroolka D / I taabashada, si aad u ciyaarto oo aad u hakiso, saddex jeer ku dhufo kontoroolka R/I taabo, si aad dib ugu noqotid raadadkii hore oo aad gacanta ku hayso taabasho bidix ilaa 2 ilbiriqsi oo ah qaabka Muusiga. Si aad uga jawaabto oo aad u joojiso wacitaanka, taabo kantaroolka R/I ee taabo hal mar qaabka Wicitaanka si aad sidaas u samayso.
Waxay si fiican ugu habboon yihiin wax kasta, haddii aad tahay ciyaartoyga ciyaarta caadiga ah ama mid joogto ah, si aad u samayso ciyaaraha, maadaama ilaalintooda IPX4 ay kaa dhigayso mid xoogan, dhegayso muusig tayo sare leh iyo baahiyo kale. Black Shark Lucifer T1 Dhagaha-dhegaha Wireless-ka ee qiimahooda tayada leh waa taleefoonnada gacanta ugu xiisaha badan suuqa hadda.
Xusuusnow waad awoodaa iibso taleefoonnada gacanta ee bilaa-waayirka ah halkan ka ka faa'iidaysiga dalabkaaga iyo kuubanka N4DK4DZ8.
Shark Black Mako M1
El soo saaraha Black Shark ayaa go'aansaday in uu u soo baxo suuqa ciyaaraha oo leh mouse-ka cusub ee Black Shark Mako M1. Meel adag oo muhiim ah oo u timaada si ay u qanciso baahida ciyaaryahan kasta oo PC ah, oo la qabsan kara gacan kasta, ha ahaato mid yar, dhexdhexaad ama weyn.
Dhinacyada wanaagsan waxaa ka mid ah, Mako M1 oo ka socda Black Shark waxay leedahay laba dabool oo is beddel ah, sidaas darteed waxaad awoodi doontaa inaad bedesho mar kasta oo aad rabto, mid kasta oo iyaga ka mid ah waxay u muuqdaan kuwo kala duwan. Kiis kastaa wuxuu leeyahay dhinac wanaagsanWaad ku mahadsan tahay awood u yeelashada kala diristeeda, waxaan awood u yeelan doonaa inaan ka saarno ama dhigno baytariga, annagoo miisaan yareynayna haddii aan rabno inaan isticmaalno fiilada USB-ga ee uu la socdo.
Jiirka aan batari lahayn ee leh daboolka daloolsan ayaa miisaankiisu yahay 93 garaam, iyada oo aan baytari lahayn iyo daasadda daloolku waxa uu miisaankiisu dhan yahay 90 garaam, batteriga iyo daasadda simanna waxa uu miisaankiisu yahay 108 garaam iyo daasadda daloolsan iyo batarigu waxa uu ku hadhayaa culays dhan 105 garaam, dhammaan waxa la qabsan kara isticmaaluhu.
Cabbirrada Black Shark Mako M1 waa 129mm oo dherer ah, 65mm oo ballac ah iyo 40mm oo dherer ah, waxaa loogu talagalay ciyaartoyda ambidextrous. Tayada dhismuhu waa mid aad u wanaagsan, marka laga reebo balaastikada ABS waxay ka dhigaysaa mid raaxo leh in lagu qaato saacado ku ciyaarista shaashadda horteeda.
Jiirka Black Shark Mako M1 wuxuu yeelan doonaa madax-bannaani weyn Si looga fogaado in la dhex maro culeyska, iyada oo ay ugu wacan tahay xaqiiqda ah in fiilada sidoo kale la isticmaali karo, waxay naga dhigaysaa inaan ogaano dhinacan. Isku xirka mouse-ka waxaa lagu sameeyaa adabtarada wireless-ka kaas oo tagi doona mid ka mid ah dekedaha bilaashka ah ee PC.
Saacadaha isticmaalka fiilada la'aanteed waxay kuu oggolaanayaan inaad shaqeyso, ama ciyaarista ciyaaraha ama adigoon u baahnayn inaad magacyo u isticmaasho PC, maadaama ay bixiso xasilooni shaqada xafiiska caadiga ah, navigation iyo kuwa kale. Waarta waxay la macno tahay in aynaan ku xidhin oo aan u isticmaali karno saacadahaas ciyaarta.
Black Shark Mako M1 wuxuu leeyahay dareeme PixArt PMW3325, loogu talagalay in lagu bixiyo natiijooyin wanaagsan oogooyin kala duwan, oo ay ku jiraan sariiraha. Dareenku wuxuu u dhexeeyaa 200 ilaa 10.000 CPI, oo xawaaruhu yahay 100 IPS, dardargelintu waxay gaadhi doontaa ilaa 20G.
Dabeecadda loo isticmaalo waa mid cabsi leh, taasoo siinaysa natiijooyin wanaagsan iyo in ciyaartoygu uu saacado badan ciyaaro isagoo awood u leh inuu beddelo dhinacyada kala duwan ee jiirka. Mako M1 Thanks to dareemahan ayaa bixiya flicks degdeg ah, waxaas oo dhan in ay ka guuraan meel kale iyada oo aan la taaban.
Iskeetka ayaa ku imaan doona iyadoo lagu ilaalinayo caag ay tahay inaan iska saarno marka aan rabno inaan isticmaalno Kumbiyuutarkayaga, marka la ogaado isku xirka wireless-ka ama fiilada, wax walba waxay noqon doonaan arrin bilow ah. Booska skateboard-ka ayaa ku habboon in loo isticmaalo gogosha maro, walxo, oo ka mid ah meelaha kale ee aad ku ciyaari karto.
Xusuusnow waad awoodaa iibso jiirka ciyaarta halkan ka ka faa'iidaysiga dalabkaaga iyo kuubankaaga 85L9U7T9.
Soo koobida Astaamaha
SHARCIGA MADOW MAKO M1
badhamada 6 badhamada la hagaajin karo
QIIMEYNTA QIIMAYNTA Heerka codbixinta la isku hagaajin karo 125 - 250 - 500 - 1000 Hz
XIRIIR Wireless leh baytari - 1.8 mitir xadhig
Qiyaasaha iyo Miisaanka 129 x 65 x 40 mm - Laga bilaabo 90 ilaa 108 garaam
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Qalabka kale » Bixinta waqti xaddidan: Black Shark Lucifer T1 Dhagaha-dhegaha Wireless-ka iyo Shark Black Mako M1
Sida loo arko Sheekooyinka Instagram-ka xisaab la'aan goobta